Imveliso -Shanghai DaDa Electric Co., Ltd.
I-MCCB (Ityala leSekethe eliBunjiweyo)
I-Case Circuit Breaker Breaker yenzelwe ukuqhuba okwangoku kwimo yesiqhelo kwaye iyicime kwiisekethi ezimfutshane, ukulayisha ngaphezulu, ukubamba okungamkelekanga kunye nokusebenza kokukhubazeka kwamalungu esekethe yombane. Ziyilelwe ukusetyenziswa kwiiyunithi zombane ezinamandla ombane asebenzayo anqunyelwe kwi-400V ngokokulinganisela okwangoku ukusuka kwi-12,5 ukuya kwi-1600A.
I-ELCB / CBR (ukuPhuka kweSekethe yoMhlaba)
Umhlaba Ukuvuza Circuit Breaker uthotho breakers beesekethe ezisetyenziswa kakhulu kulwakhiwo, ukuthuthwa, itonela, yokuhlala, njl Uhlobo ukulibaziseka kolu ngcelele breakers yesekethe isetyenziselwa imigca yesebe
Ukuhanjiswa kweendlela; Uhlobo olulungelelanisiweyo lusetyenziselwa ukulungelelanisa isenzo sentsalela yangoku okanye ixesha lokuqhawula kwindawo.
I-MCB (Isiphekepheke esincinci)
Izahluli ezincinane zesekethe zenzelwe ukubonelela ngokunqunyulwa komthombo wamandla ngokuzenzekelayo phantsi kwemisinga egqithisileyo. Kucetyiswa ukuba kusetyenziswe kwiiphaneli zeqela (indlu kunye nomgangatho) kunye neebhodi zokuhambisa zezakhiwo zokuhlala, zasekhaya, zikarhulumente kunye nezakhiwo zolawulo.
I-RCBO (Intsalela yokuSebenza kweSaphulelo seSekethe esinoKhuselo oluGqithisileyo)
Intsalela yokusasazeka kwesekethe esetyenziswayo ngoku enokhuseleko olugqithisileyo yenzelwe ukhuseleko lomothuko wombane kwimeko yokusilela ukufakelwa kombane, ukuthintela imililo ebangelwe kukuvuza komhlaba, ukugcwala kakhulu kunye nokukhuselwa kwesekethe okufutshane.
I-RCCB (Intsalela yeSekethe yangoku)
Intsalela ye-RCCB eyintsalela yokwaphula isekethe yenzelwe kwaye yenziwa ngokungqinelana nemigangatho yamvanje ye-IEC61008-1 kwaye iyahambelana nemigangatho ye-EN50022 yotshintsho lweemodyuli. Zingasetyenziselwa ukulayisha imizila yesikhokelo esemgangathweni "ngemilo yomnqwazi" yezakhiwo ezilinganayo.
Umatshini wokukhusela isekethe
Ibhokisi ehlangeneyo ye-barbar edibeneyo